Taariikhda Pierre-Emerick Aubameyang - BBC Somali
Wuxuu horay uga tirsanaa kooxda dhalinayrada AC Milan, Pierre-Emerick Aubameyang's waxaa shaqada u bilaabatay markii si joogto ah ugu biiray kooxda Saint-Etienne 2011.
Bishii July, ayaa kooxdaas uu ka soo tagay markii uu ku biiray Borussia Dortmund, wuxuu si fiican u badalay Mario Gotze kadib markii markii uu Bayern Munich uu aaday cayaaryahankan.
Howshiisii Les Verts waxay ku dhamaatay si heer sare ah, iyadoo uu naadigu ku guulaystay koobka French League sanadkii 2013 – waxay ahayd markii ugu horaysay Aubameyang koob heer sare ah uu qaaday.
19 gool ayuu u dhaliyay kooxdiisa, cayaaryahanka u dhashay dalka Gabon wuxuu kaloo dhigay oo uu isagu sabab u ahaa sided gool. Cayaar wanaagiisaas ayaa dhaliyay in kooxda Dortmund ay ku soo iibisato 11 million oo gini oo u dhiganta ilaa 18 million oo doolar, waxaa uu u saxiixay heshiis shan sano ah.
Wuxuu markiiba bilaabay in uu koobab la qaado kooxda Dortmund.
Wuxuu noqday cayaaryahankii lixaad ee kaliya ee sadex gool cayaar kaliya ka dhaliya tartanka Bundesliga markii ay kooxda 4-0 kaga guulaysatay garoonka Augsburg.
Gool dhalintiisa ayaa wali sii socotay, iyadoo cayaaryahanka Aubameyang uu markiiba kooxda la qabsaday, sida ku cad 7 gool oo uu dhaliyay 11 kulan ee ugu horeeyay ee kooxdiisu cayaarto.
Cayaaryahanka 24 jirka ah oo dhinaca naadiyadda awoodiisu sii kordhayso ayaa heerka caalamiga aan guulo badan ka gaarin.
Hase yeeshee, waxaa mar uu is muujiyay markii uu sadex goo loo rigoorayaal ah uu ka dhaliyay kooxda dalka Niger koob loogu soo baxay cayaaraha adduunka ee bisha June dhacaya, taas ayaase ahayd guusha kaliya ee kooxdiisa qaranka waxay keentay in kooxdiisa sadexaad gasho group-ka ay ku jireen ay ka harto safarka sanadkan 2014 lagu tagayo dalka Brazil.
Maqaal Ra’yi ah:
Waxaa qoray weriyaha BBC World Service: John Bennett
Is muujinta wax kaga wanaagsan ma leh Pierre-Emerick Aubameyang's markiisii ugu horeyay tartanka Bundesliga wuxuu u yimid kooxda Borussia Dortmund.
Weeraryahanka dalka Gabon wuxuu sadex gool ka dhlaiyay Augsburg cayaartii furitaanka, iyadoo uu markiiba u cadeeyay taageerayaashii safarka ahayd in uu u qalmo 11 million oo gini, oo u dhiganta 18 million oo doolar.
Sanadka ayaa mar walba muhiimad gaar ah u lahaa cayaaryahanka 24 jirka ah.
Sanadkii 2012 wuxuu la yaab ka dhigay koobkii qaramada qaaradda Africa ee dalkiisa, kadibna wuxuu diiday Tottenham Hotspur oo soo codsatay.
Sanadkan 2013, Aubameyang wuxuu ku qasbanaaday in uu heer cayaarreedkiisa sare u sii qaado, sidaas ayuuna yeelay.
Goolka uu u dhaliyay koor St-Etienne 3-0 markii ay kaga badisay Bastia bishii January, wuxuu ahaa bilowga gool dhalinyariisa, iyadoo uu ilaa 7 gool oo is xigxiga ka dhaliyay tartanka Fransiiska ee League 1.
Aubameyang wuxuu ugu dhamaaday xilliga iyadoo uu dhaliyay 19 gool, wuxuuna dhigay goolkii guushala ee tartanka League cup ee Faransiiska, markii kooxda St-Etienne ay hanatay koobkii ugu horeeyay oo tartamaha hoose muddo sodon sano laga joogo.
Waxaa lala xiriirinayay naadiyo waawayn xilligii xagaagii, waxaa wax badan kaaga baxayaan heerka sare ee loo qiimaynayo, markii kooxda Borussia Dortmund, oo ah koox markaas uun ka guulaysatay Real Madrid si ay u gasho final Champions League, ay xoog ugu dagaalantay in ay soo qaadato.
Aubameyang, in uusan cayaar kasta ka mid noqon cayaartoyda safka hore kooxdiisa Germany waqtiga balse Jurgen Klopp, oo ninkii ka dambeeyay guushiisa kooxda Dortmund, wuxuu leeyahay saamayntiisa horay ayay u bilaabatay, aad ayaana looga qiimeeyaa kooxaha qaaradda Europe ugu xirfadda badan.
Saamayntaas waxaa raaca in uu naadigiisa kaga yaabiyay orodka fagaxda tababarka iyadoo uu dhigay waqti 30 mitir uu ku orday waqti ka dheereeya cayaaryahanka 100 mitir ee haystay Olympic-ga Usain Bolt.
Inkastoo Aubameyang uu dadaalkaas sameeyay, hadana kooxdiisa qaranka ee Gabon waxay ku guuldaraysatay in lala dhaco 2013 balse weeraryahankan waxay u ahayd 12 bilood oo la yaab leh.
Taas ayaana ah sababta aan ugu codaynayo Cayaaryahanka kubadda cagta Africa ee BBC sanadka 2013.